दाइ नभन्नू ल | Chitrawan Khabar
दाइ नभन्नू ल
ट्विटरमा भर्खर एकजना नानी आएकी छन् । उमेरमा मभन्दा कम छिन् । उनको हिसाबमा धेरै कम, मेरो हिसाबमा अलिकता मात्र कम । उनलाई ट्विटरमा नरमाइलो हुँदै गएको रहेछ । कारण के भने, ट्विटरमा नयाँ केटी देख्नै नहुने, केटाहरू जिस्किन आइहाल्ने । अलिअलि जिस्किउन्जेल त उनलाई नि रमाइलै लाग्दो हो, तर सीमा नाघेर जिस्काउन थालेपछि उनलाई असह्य भएछ ।
एक बिहान गुनासो पोखिन्, “कति मायाले दाइ भन्छु, कसैले सहन्नन् त ।”
मलाई यो कुरो खड्कियो । जिस्किने पारामा जवाफ दिएँ, “दाइ नभन्नू ल !”
उताबाट जवाफ आयो, “आफूभन्दा ठूलालाई दाइ नभने के भन्ने त ?”
“उमेरमा ठूलो हुँदैमा सबै दाइ हुने भए त बिहे चैं कोसँग गर्छ्यौ हौ ?”
“गरम्ला नि, ट्विटरमा बिहे गर्न केटा खोज्न आएको हो र ?”
“अनि दाइ बनाउन आएकी त ?”
“हो त, मेरो घरमा दाजु हुनुहुन्न ।”
“मैया! घरमा पति पनि त हुनुहुन्न होला नि ।”
“भो ! पति त बुवाआमाले जसलाई भन्नुहुन्छ, त्यसलाई मान्नी हो ।”
“त्यसो भए बुवाआमाले जसलाई प्रमाणिक रूपमा यो चैं दाइ हो भनेर देखाउँछन्, त्यसैलाई मात्र भन्नू नि ।”
“ल ल, एकतारे सर । हजुरलाई दाइ भनिन्न अबदेखि ।”
नानीले रिसाउँदै कुरा टुंग्याइन् ।
मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन– केटीहरूले किन हामी केटाहरूलाई सिधै दाइ भनिहाल्छन् ? अलिअलि चिनेजानेकाले पनि दाइ भने त ठिकै छ, तर कतै कुनै तरिकाबाट चिनजान पनि हुन नसक्ने केटीले नि बाटोमा हिँड्दा ‘दाइ ! बाटो छाड्नुस् त’ किन भन्छन् होला ? हुन त हाम्रो नेपाली समाजमा नातावाद कृपावाद यति भारी छ कि, नातागोता नभए कहीँ पनि कामै बन्दैन । परिचयको सुरूवातमै नाम, थर, गोत्र, गाउँ सोधिन्छ र चिनजान अगाडि बढ्छ । कतै न कतैबाट नाता पारेर आफ्नो काम निकाल्ने ध्याउन्नमा प्रायः नेपाली हुन्छन् । तर, नाथे बाटो छाड्ने कामका लागि पनि दाइ बनाउनुपर्छ र भन्या ? हल्का स्टाइल पारेर ‘एक्स्यूज मी, बाटो छाड्नुस् त’ भन्दा के बिग्रन्छ होला ? नेपालमा दुई शब्द अंग्रेजी नबुझ्ने को होलान् र ?
संसारमा दाजु–बहिनीको नाता यति सस्तो हो र ? यो त एक ओजिलो नाता हो । एउटै मातापिताबाट जन्मिएको, सँगसँगै हुर्किएको । मानव प्रजाति एउटा पशु हो, जसले सदैव वंशविस्तारबारे मात्र सोच्छ । दाजु-बहिनीको नाता यस्तो नाता हो, जहाँ वंशविस्तारको हुटहुटी कहिल्यै पनि बीचमा आउन्न । अब यस्तो ओजिलो नाता जो पायो त्यै ऐरे गैरेलाई भिडाउनु हुन्छ र भन्या ?
हाम्रो समाजमा नारी सुरक्षित छैनन् । बाटोमा अलिकति राम्री केटी देख्न हुन्न, केटाहरूले जिस्क्याइहाल्छन् । अझै एकान्त ठाउँमा हुने हर्कतका त कल्पना नै नगरूम् । अलिअलि चिनजान भएका केटाहरूको पनि भर नहुने, केटी अलि राम्ररी बोली कि ‘पट्टिई यार’ भन्दै प्रपोज गरी हाल्ने । शायद केटीहरूको केटाप्रतिको यही डरले नै दाइ बनाइहाल्ने चलन चलेको होला । अलिकति पनि केटाप्रति शंका लाग्यो कि फ्याट्ट ‘दाइ’को ट्याग छातीमा ठोक्दियो, केटी त पूरै सेफ !
‘नरोऊ मायालु’ भन्ने एउटा लोकगीत छ । त्यसमा केटीले दाजु भन्दै केटालाई सम्बोधन गरेकी छन् । केटाले नि बहिनी भन्दै गीत अघि बढेको छ । यो गीत बच्चा बेलादेखि नै खुब सुनियो । दाजु-बहिनीका लागि गीत बनेको रहेछ भन्ने लाग्थ्यो । त्यो बेला गीतको साहित्य नबुझे पनि अहिले बुझिँदै गएको छ । खासमा केटीले पहिल्यै दाजु भनेर केटाको प्रेमलाई परपर सार्न खोज्दी रहिछन् । केटो भने दाजुको प्रहार खपेरै भए पनि बहिनी भन्दै फकाउन लागिपरेको रहेछ । हो ! अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा हामी केटाहरूको पीडा यस्तै-यस्तै नै छ ।
ल ठीक छ ! पहिलो नजरमै कसैसँग प्रेम नपर्ला । तर, पहिलो नजरमै कोही दाजु पनि त बनिहाल्न भएन नि ! मित्रता भन्ने नि केही चिज हुन्छ यार केटाकेटीबीच, त्यै गरे भएन ? बिस्तारै-बिस्तारै मान्छे बुझ्नू । के थाहा– राम्रो पो लाग्न थाल्छ कि ? पछि त्यै केटासँग लव पर्यो भने त दाइ भनेकोमा पनि पछुतो होला नि Û यस्तो सामान्य कुरा किन नसोची दाइ बनाउन हतारिनु परेको होला ?
अब केटीहरूले पनि प्रश्न राख्लान्, “दाइ नभने के भन्ने त ?”
हरे शिव ! मान्छेलाई बोलाउनकै लागि नाम राख्ने चलन छ । त्यै नामले बोलाए भइगो । नाम थाहा छैन भने शिष्टाचारका अरू सम्बोधन् छ, त्यो प्रयोग गरे हुन्छ । त्यति नि मन नलागे ‘सुन्नुस् त’ भने ध्यानाकर्षण भइहाल्छ नि ! केही पार नलागे ‘ओइ’ भन्नू । वरपर भएका ८० प्रतिशत मान्छेले फर्केर हेरिहाल्छन् । जे भने नि हुन्छ तर नाता नगाँसिकन बोलाउनू । नाता भन्ने चिज यति सहजै गाँसिन्न, नपत्याए लव परेर केटीले नपत्याएको केटालाई सोध्नू ।
यस्तै-यस्तै सोचिरहँदा एकजना केटी मित्रको फेसबुक पोस्टमा आँखा गयो––
“मनपरेको केटाले बोलाए पो हाइ, बाँकी जम्मै दाइभाइ !”
हेर साथी ! जसो गरी तिमीले जम्मै केटाहरूलाई दाइ बनाएकी छ्यौ, त्यसैगरी त्यो केटाका कति दिदी-बहिनी होलान् । हाम्री आमैले भनेको- केटीले आफ्नो घरमा आमाजू, नन्द सहन सक्दिनन् रे ! अब आफैं सोच साथी– तिम्रा दाइभाइ भएजस्तै कति आमाजू, नन्द भए १ कसरी झेल्छ्यौ हँ जिन्दगीभर ? एकतारेबाट साभार